इसीमाना सम्वाददाता वीरगञ्ज ६ साउन २०७७ 476 पटक पढिएको
नेपाली कांग्रेस पर्साका सभापति अजय कुमार द्विवेदीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वक्ताहरुले बि.पी. कोइरालाले नेपाली राजनीतिमा गर्नु भएको योगदानका बारेमा चर्चा गर्नु भएको थियो ।
कोइरालाले नेपालको लाकेतानित्रक आन्दोलनकालागि गर्नु भएको नेतृत्वदायी भूमिका र दिनु भएको सन्देश आजको दिनमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक भएकोमा जोड दिनु भयो ।
वक्ताहरुले बि.पी. कोइरालाले लिनु भएको मेल मिलापको नीति आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिकता रहेको बताउनु भयो । बि.पी.को आदर्श र उहाँले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको मार्गबाट अगाढि बढेमा नेपालको भविष्य उज्वल हुने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा बीरगंज महानगर का उपप्रमुख शान्ति कार्की ,पार्टीका जिल्ला सचिव श्याम पटेल ,किशोरी कानु,महासमिति सदस्य प्रकाश उपाध्याय,जिल्ला सदस्य दिना गुप्ता ,रोशन लामिछाने,बिरेन्द्र यादव,,बि पि चिन्तन प्रतिष्ठान पर्सा अध्यक्ष फजिल मिया लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।सो कार्यक्रममा प्रदुम्न प्रसाद गुप्ता लागयत ५०जनाले विभिन्न पार्टी परित्याग गरि नेपाली काङ्ग्रेस मा प्रबेश गरेका थिए।